AKHRI: Musharraxiinta ugu cadcad oo shuruudo ku xiray ka qeybgalka Doorashada Galmudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI: Musharraxiinta ugu cadcad oo shuruudo ku xiray ka qeybgalka Doorashada Galmudug
AKHRI: Musharraxiinta ugu cadcad oo shuruudo ku xiray ka qeybgalka Doorashada Galmudug
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Afar ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee Doorashada Madaxtooyada Galmudug ayaa waxay markale iska diideen inay ka qaybgalaan doorashada, iyagoona shuruud ku xiray.
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), Cabdullaahi Faarax Wehliye, Cabdi Cabdullaahi Axmed (Cabdi Dheere) iyo Kamaal Daahir Guutaale oo kulan ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ka soo saareen shan qodob oo doorashada ay uga qaybgeli karaan.
Shuruudaha ay musharaxiintan ku xireen ka qaybgalka doorashada ayaa waxay ku soo aadaysaa, saacado yar uun ka dib, markii Guddiga Doorashada ee garabka dowladda uu sheegay in musharaxii aan isa soo diiwaan-gelin uu yahay mid aan horu-socod rabin.
Halka hoose ka akhriso Shuruudaha ay soo saareen musharaxiinta:
1- In la xaliyo dhamaan muaranada jira ee u dhaxeeya saamilayda Siyaasadda Galmudug.
2- In Ahlusunna Wal-Jamaaca ay qayb ka noqoto qaybaha dhiman ee doorashada.
3- In la baabi’yo guddiga doorashada Madaxwaynaha ee hadda jira iyo in la isukeeno saamilayda siyaasadeed laguna heshiiyo waqtiga doorashada.
4- In guddoonka blBaarlamaanka uu xildhibaanada u ogolaado in ay si xor ah ula kulmi karaan musharixiinta Madaxwaynaha iyadoo aanay jirin wax cadaadis ah ama hanjabaad ah.
5- In Doorashadu noqoto xor iyo xalaal, isla-markaana gacan saddexaad ay goobjoog Ka noqoto.
ka qeybgalka Doorashada Galmudug
Musharraxiinta ugu cad-cad oo shuruudo adag ku xiray